Dad badan oo ku dhintay Shil ka dhacay dalka Nepal - Radio Risaala: Somali News Online
Home Caalamka Dad badan oo ku dhintay Shil ka dhacay dalka Nepal
Dad badan oo ku dhintay Shil ka dhacay dalka Nepal
Ugu yaraan 28 qof ayaa ku dhimatay in ka badan toban kalena waa ay ku dhaawacmeen ka dib markii bas rakaab oo aad u buuxay uu ka dhacay waddo ku taalla gobolka buuraleyda ah ee waqooyi galbeed ee Nepal, sida ay saraakiishu sheegeen.
Shilka oo ka dhacay gobolka fog ee Mugu ayaa dhacay yimid ka dib markii uu Banjaray mid ka mid ah taayirrada hore ee Gaariga, sida uu sarkaal ka tirsan degmada Rom Bahadur Mahat u sheegay Wakaaladda Wararka AFP.
Gaariga Baska ee Shilka gala ayaa ka yimid degmada Banke ee koonfurta kuna sii jeeday aagga Mugu waxaana la rumeysan yahay inay saarnaayeen ugu yaraan 45 qof, oo badankood u safrayay si ay ugu dabaaldegaan xuska Hinduuska .
Diyaaradaha qumaatiga u kaca ayaa dhaawacyada u qaaday isbitaallada si loogu daweeyo, iyadoo samatabbixiyeyaashu ay sii wadeen baadi -goobka dadkii ka badbaaday iyo dhibbaneyaashii goobta shilku ka dhacay .
Shilalka gaadiidka ee aadka u dhimashada badan ayaa ku batay dalka Nepal sababo la xiriira waddooyinka oo liita, baabuurta oo si xun loo dayactiray iyo Darawalada qaar oo gaadiidka u wada si xowli ah.
Previous articleDowladda Ingiriiska oo kamid noqoneysa saamileyda dekadda Berbera
Next articleWeerar ka dhacay Gobolka Jubbada Hoose & faah faahin laga helayo